9 Tilmaamood oo ku saabsan abuuritaanka bandhigyo PowerPoint wax ku ool ah | Martech Zone
9 Tilmaamood oo ku saabsan abuuritaanka bandhigyo PowerPoint wax ku ool ah
Khamiis, Maarso 17, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaan isku diyaarinayaa soo bandhig aan sameynayo ilaa 7 toddobaad kadib. In kasta oo kuwa ku hadla ee aan ogahay ay ku celcelin doonaan isla soo bandhigiddii hore iyo in ka badanba, hadalladaydu had iyo jeer waxay umuuqdaan kuwo sifiican uqabanaya markaan diyaariso, shakhsi ahaan, dhaqanka iyo kaamil ah iyaga waqti dheer ka hor dhacdada.
Hadafkeygu waa inaan waligey tilmaamin waxa shaashadda ku jira, waa inaan nashqadeeyo isjiidooyin cajiib ah oo la shaqeynaya hadalka. Tani waxay kordhisaa garashada iyo xusuusta labadaba. Maaddaama ku dhowaad nus dadka ay doorbidayaan inay u tagaan dhakhtarka ilkaha halkii ay ka fariisan lahaayeen bandhig, waxaan marwalba hiigsanayaa inaan ku tuuro qosol sidoo kale!
Sida laga soo xigtay a sahan cusub oo Prezi ah, 70% dadka shaqeeya ee Maraykanka ah ee bixiya bandhigyada waxay dhahaan xirfadaha soo bandhigida ayaa muhiim u ah guusha ay ka gaaraan shaqada
Clémence Lepers waxay ka caawisaa ganacsiyada inay dhisto garoonno adag, dameerro lagu laado oo qanciya isla markaana xira iibyo badan. Waxay isku soo uruurisay xogtan 9 Talooyin ku saabsan soo bandhigid wax ku ool ah:
Ogow Dhageystayaashaada - waa kuwama? Maxay halkaa u joogaan? Maxay u daneeyaan? Maxay u baahan yihiin oo ay rabaan?
Qeex Himilooyinkaaga - Hubso inay yihiin SMART = cayiman, la cabbiri karo, la gaari karo, macquul ah, isla markaana waqti ku socda.
Farsamo Fariin Adag - Ka dhig mid fudud, la taaban karo, lagu kalsoonaan karo, oo faa'iido leh.
Abuur Sharax - Ka bilow hordhac ku saabsan sababta ay dadku u daneynayaan, u sharxaan faa iidooyinka, ay ugu taageeraan fariintaada xaqiiqooyinka, ku hayso hal farriin-hoosaad halkii slide, kuna dhammaato wicitaan-u-gaar ah oo gaar ah.
Diyaarso Waxyaabaha Kala Duwan - Isticmaal cabbirka xarfaha, qaababka, farqiga iyo midabka si aad aragti u abuurto.
Dhis Mawduuc - Xullo midabbo iyo fartuunlo matalaya adiga, shirkaddaada, iyo mowqifkaaga. Waxaan isku dayeynaa inaan calaamadeysno bandhigyadayada sida bartayada sidaa darteed waxaa jira aqoonsi.
Isticmaal Qalabka Muuqaalka - 40% dadku waxay sifiican ugajawaabi doonaan muuqaalada halka 65% ay sifiican uguhayaan macluumaadka muuqaalka.
Dhageyso Dhageystayaashaada Si Deg Deg Ah - 5 Daqiiqo waa celceliska feejignaanta celcelis ahaan dhagaystayaashuna ma xasuusan doonaan kalabar waxaad soo sheegtay. Hal qalad oo aan horey u sameyn jiray wuxuu ahaa kahadalka aqoonsiyadeyda… hada taas waxaan u dhaafayaa MC waxaanan hubinayaa in isbadalkeygu ay bixinayaan saameynta iyo awooda ay u baahan yihiin.
Cabir Waxqabadka - Waxaan fiiro gaar ah uleeyahay isla markiiba khudbadayda kadib inta qof ee raba inay ila hadlaan. Markasta oo kaararka ganacsiga badani sii fiicnaadaan waxqabadkaygu! Maaddaama dadku ay guurguuraan, waxaan sidoo kale ku dhiirrigelinayaa inay qoraal ii soo diraan si aan ugu biiro warsideydayda (qoraalka MARKETING 71813).
Ugu dambeyntiina, ganacsiga isla markiiba ka soo baxa dhagaystayaasha ama shabakadda ay kuu diraan ayaa muujin doonta sida aad ugu guuleysatay. Dib ugu yeerida inaad hadasho had iyo jeer waa kudar, sidoo kale!
Tags: Kuwa Clémence Leperstalooyin bandhig wax ku ool ahinfographictalooyin bandhig muhiim ahtalooyin muhiim ahxogta Powerpointtilmaamaha soo bandhigida awooddatilmaamaha awooddapptpopbandhig faneedtilmaamaha soo bandhigidatalooyinka bandhigga infographicsoo bandhigidprezihadlayay
Sidee Xayeysiiyayaashu Uga Faa'iidaystaan ​​Waallida Maarso?
Agoosto 11, 2016 saacaddu markay ahayd 6:01 PM
Adeegsiga muuqaallo wax ku ool ah ayaa hubaal ka dhigaysa inay dhagaystayaashaadu xiiseynayaan. Laakiin iska hubi inaadan si xad dhaaf ah u isticmaalin iyaga! Waxay ku wareegi karaan waxyaabo badan haddii ay badan yihiin. Waad ku mahadsantahay wadaagida talooyinka.